ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - ။ NINGBO HQC Electronics, LTD
HDMI ကေဘယ်ကြိုးတွေ, Optic ဖိုက်ဘာကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့် Patch ကြိုး, Lan ကြိုးတွေနဲ့ RJ11 / RJ45 patch ကိုကြိုး, DVI ကြိုးတွေ, VGA ကြိုးတွေ, Display ကို port ကိုကေဘယ်ကြိုးတွေ, USB 2.0 ကိုနှင့် 3.0 ကြိုးတွေ, RCA ကြိုးတွေ S-Video ကြေးနန်းနှိုးစက်ကြိုးတွေ, နာယကကြိုးတွေ, Scart ကေဘယ်ကြိုးတွေ, coaxial cable, ပါဝါကေဘယ်ကြိုးတွေ, SATA, DB / DC ကကြိုးတွေ, အမျိုးမျိုးသော Cable ကိုအသင်းတော်များနှင့် Connectors စသည်တို့ကို
2nd အစိုးရအဖွဲ့နှင့် Tools များ
19 "ဝန်ကြီးအဖွဲ့, ပွင့်လင်းထိန်သိမ်း, အမှတ်တရ mount ကွင်းခတ်နှင့်ဝန်ကြီးအဖွဲ့ cable ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုဘားနဲ့တူဆက်စပ်ပစ္စည်း, fixed သို့မဟုတ်လျှောကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း, သတ္တု Keyboard ကို, ပေါကျကှဲသို့မဟုတ် Non-ပေါကျကှဲပြား, ဝါသနာရှင်ပြား, ကွန်ယက် Crimping & အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ် & tools တွေကိုချကိုထိုးကြိတ်, ကွန်ယက် cable ကို tester, ပါဝါ စသည်တို့ကိုဖြန့်ဖြူးယူနစ် (PDU အား)
3ကြိမ်မြောက် Faceplate နဲ့ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဒါပေါ်မကျြနှာကိုပန်းကန်, အဓိကကြောကျတုံး jack, Patch panel က, ဖိုင်ဘာအော့ပတစ် terminal ကို box ကို ODF, LSA modular, မျက်နှာပြင် box ကို ADSL Modem ကို splitter, ဖြန့်ဖြူး box ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, adapter, ဆိပ်ကမ်း Connectors အကောက်ခွန် Cable ကိုထုတ်ကုန်များနှင့်။
HQC ကြီးမားသောအသံအတိုးအကျယ်အမိန့်နိုင်စွမ်းသည်နှင့်အတိုဆုံးသေချာပေးသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ပစ္စည်းများနှင့်စမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားအော်ပရေတာ 2000 ကျော်လုပ်သားအင်အားနှင့်အတူ Ningbo (Orient Rack®) နှင့် Changzhou (Lan comax®) တွင်နှစ်ဦးကိုအကြီးဆုံးထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းရှိပြီး ကြာမြင့်ချိန်။ HQC အမြဲအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်အဘိုးနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးပေါ်အခိုင်အမာဆိုထားသည်။
2nd0င်စွဲချက်အစားထိုးဝန်ဆောင်မှုကမ်းလှမ်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရှည်ကာလအာမခံချက်နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်, အသံပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုပေးနဲ့0င်စွဲချက်အမြန်အစားထိုးယန္တရားအတွက်တာဝန်ရှိသည် 100% ရှိပါတယ်။ HQC အမြဲ "ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကနေသောဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိယာမကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။
3ကြိမ်မြောက် ခိုင်မာတဲ့ R & D အတွေ့အကြုံအပေါ် Professional ကဆက်သွယ်ရေးအခြေခံ
ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျကျွန်တော်တို့ရဲ့, ရန်လိုတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နှင့်ပြည့်စုံသောအုပ်စုတစုကိုသင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုဖြေရှင်းချက်ပူဇော်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ဒေသခံဝယ်လိုအားအဘို့မဆိုစိတ်ကူးရှိပါကကျနော်တို့ခိုင်မာတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကူအညီနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော input ကိုပေးလိမ့်မည်။ HQC ရောင်းအား Know-ဘယ်လိုထဲမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သာ, ဒါပေမယ့်လည်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မရှိကြပေ။
HQC ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ Generic cable ထုတ်ကုန်များအပြည့်အဝအကွာအဝေးရောင်းချလျက်ရှိကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သိသာတဲ့အချို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစက်ရုံများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ကြသည်, သို့သော်, က HQC နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းများမှာပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်ပူဇော်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်မထားဘူး။ နှစ်ပေါင်း 20 နှင့်အတူအတွေ့အကြုံကိုအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာမှန်းချက်ရဲ့, ငါတို့သည်အဘယ်သူ၏အရည်အသွေးကိုပြီးသားအများအပြားကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းများတွင်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်အချို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းပေါ်တွင်ပြည့်စုံအရည်အချင်းပြည့်ပေးသွင်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်, အားလုံးထုတ်ကုန်များအတွက်, HQC ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုကတိပေး။ ဤနည်းအားဖြင့်ပင်သေးငယ်တဲ့အမိန့်ကိုအကြှနျုပျတို့မှတူညီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ကိုအ quotation အဘို့သင့်လိုအပ်ချက်, သတ်မှတ်ချက်တွင်သို့မဟုတ်နမူနာပေးပို့ဖို့အခမဲ့ခံစားရနှင့် ပို. ပို. clients များ HQC နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရွေးချယ်ရာတွင်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျိန်းသေ Win-Win ကိုဖန်တီးရန်အလွန်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းဖွင့်ခြင်းနှင့်သင်, စျေးနှုန်းထဲမှာဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းအသေးစိတ်ကိုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်, ခြားနားချက်မှာခိုင်မာတဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအံ့သြလိမ့်မည်။ လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူရေရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။